सलमानकै कारण प्रियंकाले ‘भारत’ छोडेकी हुन् त ? | जनदिशा
सलमानकै कारण प्रियंकाले ‘भारत’ छोडेकी हुन् त ?
एजेन्सी, २८ भदौ । अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले सलमान खानको फिल्म ‘भारत’ किन छोडिन् भन्ने प्रश्न अझैं पनि उठिरहेको छ । प्रियंका र निकको बिहेको कारण प्रियंकाले ‘भारत’ छोड्नु परेको भनिदै आएको थियो । तर अहिले आएर प्रियंकाले सलमानको सो फिल्मबाट हात झिक्नुको कारण अर्कै भएको खुल्नमा आएको छ ।
प्रियंकाले ‘भारत’ छोड्नुको कारण सलमान आफै भएको खुलासा भएको छ । बलिउड मिडियाका एक सुत्रले यो कुराको खुलासा गर्दै लेखेका छन्, ‘फिल्ममा तब्बु र दिशा पटानीलाई समावेश गरिएसँगै प्रियंका भ्रममा परिरहेकी थिइन् । त्यस्तै सुटिङ ससेटमा अभिनेता सलमान ढिला आउने गरेको कुरा पनि प्रियंकाले थाहा पाइन् । प्रियंकालाई लाग्यो, सलमानको यस्तो नेचरले सुटिङ समयमै पूरा हुदैन र उनको हलिउड फिल्ममा नोक्शान हुन्छ ।’
त्यसोत, थाहा भएकै कुरा हो, अभिनेता खान जहिल्यै पनि सुटिङ सेटमा ढिला पुग्छन्, भने सुटिङ पनि समयमा कहिल्यै पूरा हुँदैन । यसै कारण प्रियंकाले ‘भारत’ फिल्मबाट हात झिकेकी बताईएको छ ।
Previous Previous post: दुई पोष्टरमा धिरज र साम्राज्ञीको ‘इन्टु मिन्टु लण्डनमा’
Next Next post: सोलुखुम्बुमा भालुको दादागिरी, आक्रमणबाट दुई जना गम्भीर घाइते